महानायक राजेश हमालले विज्ञापन खेलेको जगदम्बा स्टिल विजुलीको बील नबुझाउने ठूला घरानियाँको सुचीमा, साँढे २ अर्ब नतिर्न जालझेल ! - Nepal Insider
Home/समाचार/महानायक राजेश हमालले विज्ञापन खेलेको जगदम्बा स्टिल विजुलीको बील नबुझाउने ठूला घरानियाँको सुचीमा, साँढे २ अर्ब नतिर्न जालझेल !
महानायक राजेश हमालले विज्ञापन खेलेको जगदम्बा स्टिल विजुलीको बील नबुझाउने ठूला घरानियाँको सुचीमा, साँढे २ अर्ब नतिर्न जालझेल !
काठमाडौं हेलिकोप्टरबाट ओर्लिएर महानायक राजेश हमालले भन्छन्,‘यो विशाल फ्याक्ट्री । राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो स्टिल फ्याक्ट्री । यो हो जगदम्बा स्टिल । स्टिल कारखाना पुगेर भन्छन्,‘यस फ्याक्ट्रीद्वारा उत्पादित ५० टन भन्दा बढी फलामे बस्तुहरु देशका महत्वपूर्ण संरचना निर्माण गर्न प्रयोग भइसकेका छन् । साथै मुलुकको निर्माण सामग्रीमा लगभग ५० प्रतिशत हिस्सा अगट्न सफल यो हो जगदम्बा स्टिल‘‘।’ यो विज्ञापन तपाइ हामिले पक्कै ुनेका र देखेका छौ
नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालले विज्ञापन गरेको जगदम्बा स्टिल राज्यलाई साँढे २ अर्ब ५० करोड विजुली महशुल नबुझाएपछि विवादमा तानिएको छ ।यस जगदम्बा स्टिलका मालिक शाहिल अग्रवाल रहेका छन् । जगदम्बा स्टिलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिर्नुको सट्टा आनाकानी गरिरहेको पाइएको छ ।अग्रवालको स्वामित्व रहेको जगदम्बा स्टिललाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइनमार्फत चौविसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउँथ्यो ।
उच्च स्रोतले शंकर ग्रुपकमा महापवन्धक रहेका शाहिल अग्रवाल शक्तिकेन्द्रको प्रयोग गर्दै अर्बौ रकम मिनाहा गर्ने दाउमा रहेको दाबी गरेको छ । उच्च स्रोतले ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईन’ मार्फत विजुली प्रयोग गरेपछि अग्रवाललाई बिलिङ भने नगरेको बताएको छ । २०७३ देखि २०७५ फागुनसम्मको शुल्क २ अर्ब ५० करोड बुझाउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा बिलिङ नगरेको बताएका छन् । विजुलीको बील नबुझाउने ठूला घरानियाँको सुचीमा शहिल अग्रवाल पहिलो नम्बरमा छन् ।
तर सरकारले भने अझैसम्म लाइन दिइरहेको छ ।सर्वसाधरणले ५ सय रुपैयाँ नबुझाउँदा लाइन काट्न पुग्छन् । तर , ठूला घरानिया व्यापारीले साँढे २ अर्ब रुपैयाँ नबुझाउँदा र अटेरि गरिरहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण के हेरेर बसिरहेको छ ।
सय रुपैयाँमा सबै उपचार गर्ने अस्पताल खोल्ने उत्तम सञ्जेल श्रीमती सहित पक्राउ
धुर्मुस सुन्तलीको समर्थन गर्दै रबि लामिछानेले लेखे अस्ट्रेलियाबाट मन छुने स्टाटस
यी हुन् बाटोमा भेट्टाएको पाँच लाख फिर्ता गर्ने प्रहरी जवान एक सेयर गरि सम्मान गरौ